Cranked Hyperlink Double - umenzi wokuhambisa umbane waseSingapore pte ltd
Inkqubo yokuThutha ngokuthe ngqo, iiComputer kunye neeNxibelelwano eziDibeneyo
Ikhonkco le-roller elichanekileyo liyinyani esebenzayo kwaye iguquguqukayo yokuhambisa amandla ombane, athi, ngaphakathi koqeqesho lwezicelo zeshishini, asebenzise ngokupheleleyo konke ezinye iindlela zetyathanga ezazisetyenziswa ngaphambili.
I-Hyperlink engaphandle-Umdlalo weendaba (BS / DIN) wokuphakamisa iPin Hyperlink-Umdlalo weendaba (ANSI)
Ukusetyenziswa ngabo bonke ubungakanani kunye neentlobo zekhonkco apho ukhuseleko olufunekayo lufunwa khona. Ikhonkco libonelelwa ngezikhonkwane zokuthambisa ezikrwecwe kwisitya esinye sangaphandle. Esinye isitya sangaphandle ngokuqinisekileyo sisiphazamiso esifanelekileyo malunga nezikhonkwane ezithweleyo, eziphelo zazo ekufuneka zibethelelwe ngentla kungekudala emva kokuba isitya sifakelwe. Amaqhosha okudibanisa afanelekileyo kufuneka asetyenziswe kube kanye; amakhonkco amatsha kufuneka asetyenziselwe ukutshintshisa amakhonkco oqhekekileyo. (Jonga 'iRiveting Chain engapheliyo' yemiyalelo iyonke).
Ukuqhagamshela ikhonkco-Umdlalo weSlip (BS / DIN / ANSI)
Ikhonkco elinxibelelanayo elinikezwe ngezikhonkwane ezibini ezidityanisiweyo ezibekwe kwipleyiti yangaphandle. Icwecwe elingaphandle lilungile kwisikhonkwane sokudibanisa kwaye sikhuselwe ngokuma ngepini yokwahlulahlula ngesiphelo seprojekthi nganye yokudibanisa ipini.
Ukuqhagamshela i-Hyperlink-Umdlalo weSlip (BS / DIN / ANSI)
Isetyenziswe kumatyathanga amafutshane e-pitch kuphela. Ukubonelelwa ngezikhonkwane ezibini zokudibanisa ezixhonywe kwipleyiti engaphandle, kugqityiwe kulungelelaniswe ipleyiti ekhuselweyo ngendlela yekliphu yasentwasahlobo, enguNombolo 27, engena kwimijelo ngelixa lisezipini.